ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): ငါမုန်းတဲ့သူများ
ကျနော်လဲ ပြဿနာတက်နေတယ်ဗျ။ ဖင်နဲ့ခေါင်းနဲ့ ဆောင့်မသေတတ်လို့...
It'savery great post. I've received some mails that you sent through gmail. I also dislike these empty-minded burmese military dictators at the bottom of my heart.
ဟား ဟား ... ဖင်နဲ့ ခေါင်းဆောင့်ပြီး မသေခိုင်းပါနဲ့ညီမရယ်။ သနားပါတယ်။
moe kyal here.. i hope u can remember me.. i can't read some of the mm font sis.. why? :( anyway i like yr this "ngar mone tat thu myar" ..
LOL,,hahahaha,, Gosh,,, I like that,, I like you being straightforwards..that's what many people can't do. Keep going, Cheers!
WAY TO GO, SIS. :D
ကောင်းတယ်.. ဇင်ကတော့ကြိုက်တယ်.. ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဘဲ..
ရှေ့မှာတော့ သေလောက်အောင်ပြုံးနေပြီး ကွယ်ရာမှာ ပက်ပက်စက်စက် အတင်းပြောတတ်တဲ့ ဒီစင်္ကာပူက အသက်ကြီးပြီး အချိန်မစီတဲ့သူတွေကို ပိုမုန်းတယ်..။ ဘုရားတရားလည်းလုပ်လိုက်တာ သူတို့အပြင်နှစ်ယောက်မရှိဘူး.. သူများသား..သမီးလည်း မှိုချိုး..မျစ်ချိုး ပြောတတ်လိုက်ကြတာ သူတို့အပြင်နှစ်ယောက်မရှိဘူး..။ စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်..